हाजार्ड फेरी घाइते! | Hamro Khelkud
हाजार्ड फेरी घाइते!
एजेन्सी – चोटसँग जुधिरहेका स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडका बेल्जियन मिडफिल्डर इडेन हाजार्ड पुन: चोट बोक्दै कम्तीमा पनि चार साता मैदान बाहिर रहनेका भएका छन् ।
प्रशिक्षण दौरान दायाँ खुट्टाको मांशपेशीमा चोटका कारण हाजार्ड कम्तीमा पनि तीन देखि चार साता मैदान बाहिर रहने क्लबले पुष्टि गरेको छ । रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले मंगलबार मात्रै रियल भालाडोलिडविरुद्धको खेलमा उनलाई टोलीमा समेटेका थिए ।
गत अक्टोबरदेखि चोट बोकेका हाजार्डले कोरोना महामारीपछि सुरु भएको स्पेनिस ला लिगामा पूनरागमन गरेपनि पुन: चोट बोक्न पुगेका थिए । त्यसयता उनी टोली बाहिर रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय अफ सिजनमा तौल बढेको कारण आलोचित हुँदै आएका हाजार्ड चोटबाट ठिक भएर प्रशिक्षणमा फर्केका थिए । तर पुन: चोट लागेपछि उनको पुनरागमन प्रतीक्षा लम्बिएको छ ।
गत सिजनको समरमा इंग्लिस क्लब चेल्सीबाट म्याड्रिड आएका उनले रियलबाट मात्रै २२ खेल खेलेका छन् । अघिल्लो सिजन अधिकांश समय उनी मैदानबाहिर नै रहेका थिए । त्यसका बाबजुद क्लबले स्पेनिस लिगको उपाधि जितेको थियो ।
चोट बोकेसँगै रियलमा २९ वर्षीय हाजार्डको दोस्रो सिजन पनि उल्लेख्य हुनेमा शंका गरिएको छ । अब उनी अक्टोवर दोस्रो साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय विश्राम पछि मात्रै रियलको टोलीमा समावेश हुन सक्नेछन् । उनले सिजनको पहिलो एल क्लासिको समेत गुमाउने देखिएको छ ।